» Dagaal Dhex Maray Oday 60-Jir Ah & Rag Ka Tirsan Alshabaab – Akhri
Dagaal Dhex Maray Oday 60-Jir Ah & Rag Ka Tirsan Alshabaab – Akhri
Shirka Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee khamiisla ah ayaa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho, waxaana shirka gudihiisa lagu soo hadal qaaday dagaal dhex maray Oday 60-jir ah iyo rag ka tirsan Alshabaab.
Shirka oo uu shir Godoominayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxaa warbixino laga dhageystay Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Ducaale “Islow” iyo Wasiirka Gaashaandhiga Mursal.
Wasiirka Amniga ayaa ugu horreyn ka warbixiyay halka uu marayo amniga Dalka, isgoona shaaca ka qaaday in Hay’adaha amniga maalmihii dambe howlgalo xoogan ka wedeen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Sidoo kale shirka ayaa laga dhex sheegay in Odya 60-jir ah, isla markaana ku nool Gobolka Shabeelaha Hoose ay u yimaadeen raga ka tirsan Alshabaab, kuwaas oo weydiiyay in uu bixiyo lacag ay ugu yeereyn Zakawaad.
Odaygii ayaa xubnihii Alshabaabka ahaa ka biya diiday in uu bixiyo lacagta, waxaa ayna ragii ka tirsanaa Alshabaab isku dayeen in ay xabsiga u kaxeeyaan, balse intaba waa uu ka diiday taasoo layaab ku noqotay.
Ragii ka tirsanaa Alshabaab ayaa amiirkooda ku wargeliyay arintaan iyo waxa uu sameeyay Odayga, waxaa uuna amiirka u sheegay in ay iska daayaan.
Odaygaan ayaa maanta la sheegay in uu la soo xiriiray Hay’adaha amniga Dowladda Soomaaliya, isla markaana u sheegay dhacdada ku dhacda